ပျော်ပျော်ပါးပါး Hiking ထွက်ကြမလား - Hello Sayarwon
ကျန်းမာစေမည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ » ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တိုက်တွန်းခြင်း
လူအတော်များများက ပုံမှန်နေ့စဉ်ဘဝမှာ လမ်းလျှောက်ဖြစ်ကြေပေမယ့် ခြေလျှင်ခရီး‌တွေကို ပုံမှန်အားကစားတစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ကြတာတော့ နည်းပါတယ်။ ခြေလျှင်ခရီးထွက်တာ တနည်း Hiking ထွက် တာဟာ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးကျေးဇူး အမြောက်အများပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင်ထင်မှတ်ထားတာတွေရော မထင်မှတ်ထားတာတွေရောပါ။
ခုလို COVID-19 ကပ်ဘေးကာလမှာ Camping လုပ်ကြတာတွေခေတ်စားလာကြပေမယ့် ခြေလျှင်ခရီးထွက်တာမျိုးကိုတော့ အလုပ်နည်းကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သာယာရှုမောဖွယ်ရှုခင်းမျိုးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်နိုင်မယ့်နေရာမျိုးတွေ နည်းပါးနေသေးတာကြောင့်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုကပ်ဘေးကာလမျိုးမှာ ခြေလျှင်ခရီးတွေ ပိုထွက်သင့်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးအန္တရာယ်နဲ့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ဖွယ်ရာတွေပြည့်နေတဲ့ မြို့ပြလူနေမှုဘဝကို စွန့်ခွာပြီး အနီးဝန်းကျင်က ကျေးလက်ဒေသတွေကို ကာလတို လမ်းလျှောက်ခရီးလေးတွေ ထွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အကျိုးရှိလာမှာကို သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။
Hiking ထွက် ပါလို့ ဘာလို့ပြောရတာလဲ
တစ်ခုတော့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ Hiking က လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံးအကြိမ်မှာဆိုရင် သေမတတ်ပင်ပန်းတယ်လို့ လူအတော်များများက သူတို့အတွေအကြုံတွေကို မျှဝေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေတိုင်းက နောက်တစ်ကြိမ်၊ နောက်တစ်ကြိမ်ဆီကို ဆက်ပြီး လှမ်းချီသွားကြသူတွေချည်းပါ။
ပထမတစ်ကြိမ်မှာ ပင်ပန်းပေမယ့် အလေ့အကျင့်ရလာရင် ဒီအားကစားရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို နားလည်လာရင် ဆက်ပြီး ခရီးတွေထွက်ချင်၊ လမ်းတွေ လျှောက်ချင်နေတော့တာပါပဲ။
Hiking က ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်စေရုံသက်သက်တင်မဟုတ်ဘူးလေ။ စိတ်ကိုလည်း လန်းဆန်းတက်ကြွစေသလို ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်တဲ့ အားကစားတစ်မျိုးပေါ့။
ပုံမှန် Hiking ထွက် လေ့ရှိတဲ့သူတွေဟာ
သွေးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးတွင်းသကြားပမာဏ တည်ငြိမ်လာမယ်
စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ သောကတွေကို တွန်းလှန်နိုင်မယ်။
ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေကတော့ ခုလို ကိုဗစ်ကာလမျိုးမှာ Hiking ထွက် တာက တခြားအားကစားနည်းတွေထက်ပိုပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားကြပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ နေအိမ်ကနေ အပြင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်ခွာခွင့်မရဖြစ်နေချိန်ဖြစ်တာကြောင့် လူနည်းနည်းလေးနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တစ်ဦးတည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာရင်း ခရီးရှည်လမ်းလျှောက် ထွက်တာက စိတ်ရောကိုာ်ပါ အကျိုးရှိစေမှာမို့ပါ။
လမ်းလျှောက်ခရီးဆိုတာ တောထဲပဲထွက်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိသလို မိုင်ရာနဲ့ချီဝေးတဲ့နေရာတွေမှာပဲ လုပ်ရမယ်လို့လည်း မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။ တချို့တွေက မြို့ထဲ၊ တချို့က မြို့ပြင်၊ တချို့ကတော့ သဘာဝအလှတရားတွေရှိတဲ့ တောတောင်တွေဆီ ထွက်ကြပါတယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ အဆင်ပြေရာပေါ့။
သေချာတာကတော့ Hiking ထွက် မယ်ဆိုရင် စနစ်တကျ အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တောထဲတောင်ထဲဆို ပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းတွေ ပြုလုပ်မိမှာကိုတော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အမှားတွေကနေ သင်ယူလို့ရပါတယ်။
ဒီအားကစားက ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကို ကျန်းမာအောင် ကူညီပေးနိုင်တာမို့ မလွယ်ကူနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သိနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ်က ကျေးလက်ဒေသတွေ၊ တောထဲတောင်ထဲတွေကို သွား Hiking ထွက်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေကို သတိထားပြင်ဆင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ရာသီဥတုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အဝတ်အစား
မြေပုံ (Google Map က နေရာဒေသတိုင်းမှာ အဆင်မပြေတာကို နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်)
ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးက သေချာပေါက် အသုံးချရမယ့် အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်မနေ အရေးပေါ် အခြေအနေတွေမှာ လိုအပ်လာမယ့် ပစ္စည်းတွေပါ။ ဒါတွေမပါပဲ ခရီးရှည်လမ်းလျှောက် ခရီးတွေ သွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ အချိန်အားလပ်ပြီး အလျဉ်းလည်းသင့်တယ်ဆိုရင် မိမိနေထိုင်ရာ မြို့ပြရဲ့ အနီးနားဝန်းကျင်က သဘာဝနေရာလေးတွေဆီကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Hiking ထွက်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလကြောင့် ပိတ်လှောင်နေတဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေကို ဖြေလျှော့ရင်း ကျန်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာမို့ဖြစ်ပါတယ်။
နီးနီးနားနား Camping သွား ဒီအချက်တွေသတိထား
Camping သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ကြုံလာရနိုင်သလဲ။ ဒီပြဿနာတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို လိုက်နာသင့်သလဲ။
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2021 .3mins read
လမ်းလျှောက်နိုင်စေဖို့ မတ်မတ်ရပ်နိုင်စေဖို့ စသည်ဖြင့် ခါးရဲ့အထောက်အပံ့တွေက များလှပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ခါးနာသွားစေနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေကလည်း မနည်းလှပါဘူး။
အရိုးကျန်းမာရေး, ကျန်းမာရေးစင်တာ ဒီဇင်ဘာ 10, 2020 .3mins read
ဆောင်းတွင်းလို ကာလမျိုးမှာ ပုံမှန်အချိန်ထက် ချမ်းစိမ့်ပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ...
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ နိုဝင်ဘာ 30, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 9, 2021 .3mins read
ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်း ခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကွဲများ